कास्कीमा विद्या भट्टराईले देखाइन् यस्तो हर्कत, इमान्दार कार्यकर्ता नै आ’क्रोशित ! – Life Nepali
कास्कीमा विद्या भट्टराईले देखाइन् यस्तो हर्कत, इमान्दार कार्यकर्ता नै आ’क्रोशित !
पोखरा – मंसिर १४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि कास्कीमा आज बिहीवार उम्मेदवारी दर्ता गरिएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) तर्फबाट स्व. रविन्द्र अधिकारीकी श्रीमती विद्या भट्टराई उम्मेदवार बनेकी छन् । विद्याले उम्मेदवारी दर्ताकै दिन देखाएको व्यवहारका कारण इमान्दार कार्यकर्ता आ’क्रोशित बनेका छन् । उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा विद्याले टाईसुट लगाएका कार्यकर्ता आफ्नो पछाडि लगाउँदै झोका समेत बोक्न लगाएपछि इमान्दार कार्यकर्ता अ’सन्तुष्ट बनेका छन् ।
उम्मेदवार दर्ताकै दिन विद्याले रवाफ देखाएको कार्यकर्ताको बुझाइ छ । विद्याको झोला बोकेर पछाडि हिँडिरहेका कार्यकर्ताको फोटो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । पतिको नि’धनपछि नेकपाबाट उम्मेदवार हुन पाउने अवसर पाएकी विद्याले यति चाँडै रवाफ देखाउनु खोज्नुले मतदाता समेत अ’सन्तुष्ट हुने एक जना नेकपा कार्यकर्ताले बताएका छन् ।
मतदाता र कार्यकर्तालाई रिझाउँदै सामान्य शैलीमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा विद्यादे रवाफ देखाएको कार्यकर्ताको ठहर रहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन हुने एक मात्र क्षेत्र एक मात्र क्षेत्र कास्की– २ मा नेकपा र कांग्रेसका उम्मेदवारबीच नै मुख्य भिडन्ड हुने देखिएको छ । तत्कालीन पर्यटन मन्त्री समेत रहेका कास्की– २ का सांसद रविन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दु’र्घटनामा परी नि’धन भएपछि कास्कीमा उपनिर्वाचन हुन लागेको छ ।
नेकपाका तर्फबाट रवीन्द्रपत्नी विद्या भट्टराईले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएकी छन् भने कांग्रेसका तर्फबाट खेमराज पौडेलले पनि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन् । पौडेलले उम्मेदवारी दर्तापछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रसंग निकाल्दै आफूले चुनाव जित्ने दाबी गरेका थिए । विद्याले मनोनयन दर्ताकै क्रममा सुटबुट लगाएर अर्कालाई झोला बोक्न लगाएर हिँडेको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा तस्वीरलाई लिएर आ’लोचना भइरहेको छ ।
Previous ७५ वर्षमा टिकट पाएका देउवाका साथी भन्छन् : लालकिल्ला तोड्छु
Next कालापानी नेपालकै हो, एक इञ्च पनि सीमा मिच्न दिन्नौं : परराष्ट्रमन्त्री
50 mins ago kamal